Senator Norm Colamen oo sheegay in qadiyadda Somaliland ka adag tahay tii ay South Sudan ku heshay aqoonsiga, laakiin somaliland | Salaan Media
Senator Norm Colamen oo sheegay in qadiyadda Somaliland ka adag tahay tii ay South Sudan ku heshay aqoonsiga, laakiin somaliland
September 4, 2013 | Published by: Hamse
US Senator Norm Colamen oo sheegay in qadiyadda Somaliland ka adag tahay tii ay South Sudan ku heshay aqoonsiga, laakiin somaliland aanay weli fahmin sida loo raadiyo aqoonsiga caalamiga ah.
XOGHAYAHA ARRIMAHA DIBEDDA EE UCID MUDANE YUSUF BUDLE OO LA KULMAY FORMER US SENATOR NORM COLEMAN OO HADDA AH LOBBYIST KA HAWL GALA WASHINGTON DC.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda iyo xidhiidhka Caalamiga ee Xisbiga UCID ayaa todobaadkii hore kula kulmay Former Senator Norm Coleman kulan gaaban magaaladda Washington, kaas oo ay ujeedadiisu ahayd siddii xafiiska uu gadhwadeenka ka yahay Senatorku oo la yidhaahdo Hogan Lovells International Legal Practice ay uga caawin lahaayeen Somaliland raadinta aqoonsiga caalamiga ah.
Senator Coleman waxa uu sheegay in uu aqoon dheer u leeyahay arrimaha somaliland, run ahaantiina uu aaminsan yahay in qadiyadda Somaliland ay aad uga adag tahay ugana macquulsan tahay tii lagu aqoonsaday South Sudan oo uu isagu gacan weyn ka geystay, waxase uu sheegay in ay aad u kala duwan yihiin sidda ay somaliland ugu hawl gashay qadiyadda aqoonsi raadiska iyo sida ay South Sudan ugu hawl gashay. Waxa uu tilmaamay in Somaliland aanay marnaba ka hadal amaba awooda saarin danta ugu jirta reer galbeedka in ay aqoonsadaan Somaliland ayse aad uga waramaan taariikhdii Somaliland. Waxa kale oo uu sheegay in ay aduunyadu isticmaasho waxa loo yaqaano Lobbyist oo intooda badan ah shaqsiyaad aqoon dheer u leh dawladda Maraykanka welibana madax sare ka ahaan jiray dalkan.
Waxa uu Senatorku sheegay in aanu hore u arag ama u maqal cid u olalaynaysa qadiyadda Somaliland, laakiin uu in badan arkay dad ka olalaynaya oo mar kasta ula soo xidhiidha arrinka Somali weyn. Waxa kale oo uu sheegay in ay hore ula soo xidhiidheen madaxda maamulka Puntland iyo weliba Khaatumo oo uu Senatorku sheegay in uu Professor Galaydh aad ula soo xidhiidho isagoo aad uga soo horjeeda qadiyadda Somaliland.
Senator Coleman oo ka mid ahaa golaha Guurtida (Senate) ee dalkan Maraykanka sanadihii 2003 ilaa 2009 ayaa hadda ah qareen/garyaqaan wayn oo ka hawl gala xafiis qareemeedka caanka ah ee loo yaqaano Lovell International Legal Practice oo hawsha ugu weyn ee uu qabtaa ay tahay waxa loo yaqaano “Lobbying” ama Wastayn casriyaysan. Senator Caleman wuxuu ka hawl galaa magaalada Washington, DC, run ahaantiina waxa uu ka mid ahaa shaqsiyaadkii suurto geliyay in ay dawladda Maraykanku aqoonsato South Sudan.
Run ahaantii Yusuf Budle oo ah Xoghayaha Arrimaha Dibedda iyo Xidhiidhka Caalamiga ee UCID ma aha markii ugu horaysay ee uu hawl noocan oo kale ah ula tegay madaxda dalka Maraykanka, waxase ay tahay mid uu u wado si aan hagrasho lahayn.
Mudane Yusuf Budle waxa uu noo sheegay in uu run ahaantii aad uga xun yahay sida ay dawladeenii Somaliland uga seexatay qadiyadda aqoonsi/dhaqaale raadinta ee aynu mudada dheer sugaynay. Waxa uu sheegay in uu filayay in isbedelka ku yimid wasaarada arrimaha dibaddu ay wax ka bedeli doonto siddii ay dawladda Somaliland wax u waday, laakiin ilaa hadda aanu arkayn wax is bedel ah oo lagu sameeyay siyaasadda arrimaha dibedda ee Somaliland oo aan ahayd wasiirkii oo laga bedelay. Waxa uu Yusuf sheegay in haddii ay dawladda Somaliland daacad ka tahay arrinka aqoonsi raadinta ay muhiim tahay in ay usoo magacawdo safiir firfircoon dalkan Maraykanka. Waxa kaloo uu ku booriyay in qadiyadda aqoonsi raadinta laga wada qayb geliyo dhamaan qurbo jooga Somaliland oo loola shaqeeyo siddii oo ay dalka u yihiin safiiro metala, oo nin wal iyo gabadh walbaa meesha ay irbadda gelin karaan inoo geliyaan. Qadiyadu kuma haboona in lagu soo koobo shaqsiyaad iyo kooxo gaar ah, ayuu yidhi Yusuf.
Ugu dambayntii Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UCID, mudane Yusuf Budle waxa uu noo sheegay in ay ku talo jiraan xisbi ahaan in ay buuxiyaan kaalintii ay dawladeenu gabtay oo ay dhawaan magacaabi doonaan safiiro xisbiyeed inoo fadhiya dalalka inoo muhiimka ah, sida USA, UK, Brussels, Ugandha, South Sudan, South Africa, iwm. Waxa uu sheegay in safiiraddasu ay ka madax banaanaandoonaan u ololaynta xisbiga UCID iyo taageerayaasha gaarka ah ee xisbiga, shaqadooduna ay ku koobnaan doonto xidhiidhka Dublomaasiyadeed ee kolba dalkaas loo magacaabay.